UMeya ufisela imboni yamatekisi unwele olude | News24
UMeya ufisela imboni yamatekisi unwele olude
UMeya waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu ubonge osomatekisi ngaba kwenzile ukuthi bathengele izingane zesikole umfaniswano. x
BEBEHLEKA kuvele awomhlathi abafundi, nothisha bezinye zezikole zesiFunda seLembe ehholo lomphakathi iSibusisiwe Hall eMandeni ngoLwesine lwangomhlaka 25 kuNcwaba (August) 2016, lokhu kulandela umcimbi wokunikela ngomfaniswano wesikole kubafundi bezikole ezehlukene zesiFunda seLembe nokuyisenzo esenziwe ngabeNhlangano yoSomatekisi eyaziwa ngeSantaco ngaphansi kwesifunda seLembe.
Ephawula, uMeya womkhandlu waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu ubonge wanconcoza, waphinde wafisela lenhlangano yoSomatekisi unwele olude ngakubize ngesenzo sokubuyisela emphakathini, wathi umuntu okufanele abongwe kakhulu yilowo owaqhamuka nalombono ngoba abanye basuke benza into eyaqhamuka numuntu othile.
Uqhube ngokubonga bonke abesembonini yamatekisi ngokubambisana ukuze lolusuku lube yimpumelelo.
Uthe: “Kusaphele izinsuku eziyisikhombisa kuphela umkhandlu kamasipala omusha ufungisiwe siyafisa ukwedlulisa ukubonga okukhulu kwabemboni yamatekisi ngendima abayidlalile ngesikhathi kuvotelwa oHulumeni basekhaya, nangokuthutha umphakathi waseMandeni namaphethelo ukuba uzoba yingxenye yomcimbi wokufungiswa, nokugcotshwa komkhandlu omusha,” kusho uMnuz Zulu.
Eqhuba, uthe bewumkhandlu bazimisele ukushintsha ubuso beMandeni wabala indawo kusukela eBhidla kuze kuyoshaya eSundumbili Plaza, wengeze ngomgwaqo iThokoza road, umgwaqo u P 415 njengomunye okufanele ubesesimeni esigculisayo.
Enkulumweni yakhe uMeya uphinde wabuyisa ithemba kwabemboni yamatekisi eMandeni wathi basezinhlelweni zokubakhela i-Rank ehlelekile, wathi ayikho i-rank eMandeni kuphela nje indawo yokupaka izimoto zamakhasimende lena abayibiza nge-rank.
Ngaphandle kwe-rank uMeya uphinde waveza ukuthi nabamatekisi kumele bahlomule uma kuthuthwa abantu ezimbizweni zikaHulumeni wathi akumele kube abamabhasi kuphela abahlomulayo.
Uthe: “Umcimbi wanamuhla ubaluleke kakhulu ezimpilweni zabafundi ngoba lokhu kwehlisa umthwalo kwabanye abazali abantula imali yokuthengela izingane imifaniswano yesikole,” kusho yena.
Uqhube ngokufanisa othisha noSonhlakahle wathi othisha abagcini ngokufundisa kodwa bagcina sebebhekelele zonke izinkinga zomfundi umzali engekho esekhaya noma emsebenzini.
Uthe: “Uma nikwazi ningoSomatekisi ukuqhamuka nesisombululo ezinkingeni zomphakathi lokhu kusho ukuthi ningakwazi futhi ukubumbana kuqedwe udlame embonini yamatekisi,” usho kanje.
USihlalo wesiFunda seLembe kwiSantaco uMnuz Bongani Mkhwanazi ongaphansi kukaSoseshini wakwaDukuza, uthe inhloso yabo enkulu bekukwelula isandla emphakathini ngokuthi banikele ngomfaniswano ezikoleni ezahlukene ngaphansi kwesiFunda seLembe.
Uthe: “Sithe asibuyisele emphakathini ngoba yiwo lomphakathi osebenzisa, nogibela izimoto, noma izithuthi zethu njengoSomatekisi, namhlanje sinemizi emihle nezimoto ezinhle ngenxa yemali ekhokhwa umphakathi uma ugibela izimoto zethu,” usho kanje. UMnuz Mkhwanazi uveze ukuthi phakathi koSoseshini abenze lomcimbi waba yimpumelelo kubalwa owase-Dolphin Coast, owaseMandeni, Sqalokuhle, Macambini-Nembe, Glenhills, Dukuza, Nyoni, kanye nowakwaMaphumulo, kanti phakathi kwezinye zezikole ezihlomulile kuloluhlelo kubalwa iMpoqabulungu High School, uThukela High School, iMandeni Primary, iBuhlebesundumbili Primary, iSiyavikelwa HP School, uDumo High School, Sthebe Primary, Wetani Primary, iTshana High School ukukha nje ngaphezulu.